जाडो महिनामा ढिला उठ्ने बानी छ ? सावधान ! देखिनसक्छन् यी समस्या
जाडो याममा छाला सम्बन्धी समस्या, श्वासप्रश्वास, हाड जोनी दुख्ने, ढाड दुख्ने, रक्तचाप बढ्ने जस्ता समस्या देखिन्छन् । यसबाट जोगिन हामीले हाम्रो बानी, व्यवहार, खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जाडो याममा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट जोगिन यी ८ काम नगर्नुहोस् :